जङ्गलमै कुहिए जडिबुटी - Nepal Samaj
१३ साउन, २०७७नेपाल समाजगण्डकी
मनाङ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण यस वर्ष जङ्गली जडीबुटी सङ्कलन गर्न सकिएन । मनाङलगायत हिमाली जिल्लामा पाइने अमूल्य जङ्गली जडीबुटी सङ्कलन गर्न नसक्दा जङ्गलमै कुहिएको छ । जडीबुटी सङ्कलन गर्न जङ्गल जाने समयमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिएकाले जडीबुटी खोज्न रोक लगाइएको थियो । यार्सागुम्बा टिप्ने समयमा कोभिडको त्रासले रोक लगाउँदा करोडौँको जडीबुटी खेर गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ ।
जिल्लावासीसहित बाहिरी जिल्लाबाट जङ्गली जडीबुटी खोज्न जाँदा कोभिडको सङ्क्रमण फैलन सक्ने त्रासले रोक लगाउँदा जिल्लाको आयस्रोत नै घटेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलले जानकारी दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले देशमा बन्दाबन्दी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले यार्सागुम्बा टिप्न रोक लगाएको हो ।
जिल्लाको प्रमुख आम्दानी नै यार्सागुम्बा रहे पनि सङ्कलन गर्न नपाउँदा कुहिएर खेर गएको उनको भनाइ छ । महँगो र लोपोन्मुख बहुउपयोगी हिमाली औषधीय जडीबुटी यार्सागुम्बा टिप्ने याममा बन्दाबन्दी गरिएकाले सङ्कलन गर्न नसकेको धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पौडेलको भनाइ छ । “सरकारले शारीरिक दूरी कायम गरेर बस्न र जमघट हुने गरी समूहमा नबस्न निर्देश गरेअनुरूप यार्सागुम्बा टिप्न रोक लगाउँदा कुहिएका छ”, नासो गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्र घलेले भने । यार्सागुम्बा सङ्कलनमा जाँदा धेरै भीडभाड हुने र जिल्ला बाहिरबाट पनि यार्सा सङ्कलनमा मानिसहरु आउँदा कोभिडको सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने हुँदा निषेध गरिएकाले कुहिएर जङ्गलमै नष्ट भएका छन् ।
मनाङकै राजश्व सङ्कलनमा टेवा पु¥याउने यार्सा गुम्बा सङ्कलनमा रोक लगाइएपछि आयस्रोतसमेत घटेको संरक्षण व्यवस्थापन समिति ९सिएमसी० तथा नासो गाउँपालिकाका अध्यक्ष घलेले बताए । वैशाख दोस्रो सातादेखि जेठसम्मको समयलाई यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्ने उपयुक्त समय मानिन्छ ।
तिरुवाका अनुसार यस वर्ष जङ्गली जडीबुटीबाट रु. ११ लाख ९२ हजार ८१५ राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा सात लाख ७७ हजार ९२५ सङ्कलन गरिएको छ ।
त्यस्तै कार्यालयले जडीबुटीबाट रु. छ लाख ६४ हजार २२५ रोयल्टी तिरेको उहाँले बताए । गत वर्ष रु २१ लाख ८९ हजार ९५५ राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा १३ लाख १३ हजार ९६५ सङ्कलन भएको थियो । रोयल्टीमा रु. आठ लाख ७६ हजार ८४३ खर्च भएको छ ।